Tiasoa : “Tsy misy fanaka malemy izany!” – Blaogin'i Voniary
Vao 11 taona monja izy dia efa nanokatra blaogy. 10 taona taty aoriana, nanangana ny orinasany manokana, Book News Madagascar, miompana amin’ny blaogy sy ny tolodraharaha an-jotra, izy. 23 taona izao i Tiasoa Samantha na fantatry ny rehetra amin’ny solon’anarana hoe “Tiasy” any amin’ny tontolon’ny blaogy. Mbola manjohy eny ihany ny fankafizany miblaogy ary tanjony mihitsy ny hitondra fiovana eto Madagasikara amin’ny alalan’ny teknolojia sy ny blaogy. Araho ary ny antsafa niarahana tamin’i Tiasoa, tovovavy Malagasy, sahy mijoro mba hahatanteraka ny nofinofiny.
Izy no Tiasoa, tovovavy Malagasy, sahy mijoro mba hahatanteraka ny nofinofiny
cc : Tiasoa
Voniary: Nanao ahoana ny fahazazanao sy ny nitaizana anao ka nahatonga anao ho toy izao?
Tiasoa: Raha ny momba ny fahazazako indray aloha dia toy ny ankamaroan’ny zaza rehetra: nilalao dia nianatra dia nihinan-kanina! 😀 Efa be resaka hatramin’ny mbola kely aho ary efa tia nanoratra be koa tamin’izany. Raha vao 11 taona monja aho ka nahay nikirakira kely ny informatika, dia ny nanokatra ny blaogiko voalohany, tamin’ilay tranonkalana blaogy nalaza be tamin’izany: Skyrock, no nataoko. Nanoratsoratra momba ny “Manga”, ireny sary miaina japoney ireny no nataoko satria mpankafy ireny koa aho.
Toe-tsaina nitaizan’ny ray aman-dreninay anay ny finiavana sy fiezahana eo amin’ny fiainana mba hahatanteraka ny nofinofy. Tsy mety hoy izy ireo ny miankina aman’olona, fa rehefa misy zavatra tiana ho azo dia ny herim-po sy ny herin-tsandry no ampiasaina. Telo vavy izahay no mpiray tampo, ka averin’i Neny aminay foana ny hoe: “Tsy hoe vehivavy dia malemy foana fa afaka mahavita zavatra tsara”. Noraisiko ho teny fiaina io teniny io, ary faly aho fa tsy toy ireny ray aman-dreny manosika ny zanany vavy hanambady fotsiny ireny ny ray aman-dreniko, fa manome lanjany hay amin’ny maha-olona ahy.
V: Mifanaraka amin’izay fitiavanao manoratra izay ve ny fianarana norantovinao sy ny asanao ?
T: Ie, nianatra ny fanaovan-gazety sy ny serasera tao amin’ny Sekoly Ambony Momba ny Ita sy ny Serasera (Samis-Esic) Saint-Michel Amparibe aho. Ary, efa ho herin-taona sy tapany izao, mitana andraikitra anankiroa izay miompana amin’ny soratra sy ny teknolojia avokoa aho. Ny voalohany, manoratra ao amin’ny Mondoblog-RFI ary ny faharoa mitantana ny blaogy sady “Agence digitale” Book News Madagascar.
Tiasoa sy ny tranonkala Book News Madagascar
V: Tovovavy be nofinofy sy tia mametraka tanjona ianao, nisy efa tanteraka ve? Inona no tena nanamarika anao?
T: Ny zavatra nandalovako ka tena nanamarika ny fiainako dia ny nahafahako nandeha tany Etazonia nisolo tena an’i Madagasikara nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny taona 2016. 21 taona aho tamin’izany ary mbola nanao gazety tao amin’ny gazety iray teto an-toerana. Tany no nahitako fa tiako ny fanaovan-gazety, saingy mbola taraiky isika raha ny eo amin’ny lafiny fanaovan-gazety sy ny teknolojia no resahina. Ka izay no naharisika ahy hanangana blaogy, satria hitako fa azo trandrahana sy hatsaraina ny asa fanaovan-gazety raha ampifandraisina amin’ny fahaizana mikirakira ny teknolojia. Eo ihany koa ny fahitako fa tsara ny haino aman-jery miainga avy amin’ny olom-pirenena toy ny blaogy sy ny gazety manohana hevitra, izay hafa amin’ny gazety politika.
V: Ahoana izany hoe vehivavy tanora Malagasy mirotsaka amin’ny sehatry ny fandraharahana izany ?
T: Màzana aloha e ! Amin’ny maha-tanora dia tsy mora ny mandraharaha satria maro ireo sakana mety hitranga. Ny tena manahirana ahy manokana dia ny eo amin’ny lafiny fitantanana olona. Raha mitarika olona lehibe kokoa noho ny tena dia misy indraindray ny fanambaniana, raha toa kosa mitarika olona tanora noho ny tena dia raisiny ho tanora toa azy ihany ianao dia sarotra be ny mametraka ilay toerana maha-mpitarika anao.
Eo amin’ny lafiny maha-vehivavy indray, misy foana ny olona manambany hoe tsy mahavita zavatra firy. Misy koa anefa ireo mankahery hatrany sy manampy be mihitsy amin’ny lafiny maro, ary ny tena mahavariana dia lehilahy no tena manampy ary noho ny vehivavy mitovy amin’ny tena. Hihi.
Na dia eo ary izany rehetra izany, amin’ny ankapobeny azo lazaina fa mafy nefa tena mahafinaritra be ilay toerana hoa vehivavy tanora mandraharaha.
« Asehoy hatrany ny maha-ianao anao. Aza menatra ny manao izay hahatanteraka ny nofinofinao! «
V: Mba zarao aminay hoe ny teny manentana na foto-kevitra ijoroanao!
T: Misy ilay teny notsongaina frantsay hoe: “Quand on veut, on peut”. Izay ny ahy no manosika ahy hatrany hiezaka isan’andro. Mahatoky sy mino aho fa rehefa tena te-hanao zavatra ianao na tena maniry zavatra iray dia tanteraka foana iny na inona na inona sakana.
V: Hafatra ho an’ny mpamaky ny blaogy, indrindra ho an’ny vehivavy amin’izao 08 Martsa izao ary e!
T: Na dia eo aza ny olana maro atrehintsika vehivavy, indrindra isika vehivavy tanora, eo amin’ny fiainana andavanandro sy ny fiarahamonina, tsarovy fa manana ny maha-izy antsika avokoa isika rehetra. Tsy misy fanaka malemy izany! Asehoy hatrany ny maha-ianao anao. Aza menatra ny manao izay hahatanteraka ny nofinofinao!
fahombiazana, fijery miabo, mpandraharaha malagasy, tanora mpandraharaha, toe-tsaina mpandresy, vehivavy malagasy
5 commentaires sur “Tiasoa : “Tsy misy fanaka malemy izany!””
Fanaka Malemy Hoe dit :
Très inspirante, et oui tsy misy fanaka malemy izany 💪👩‍💻
Mahafinaritra ny olona mijoro toa izao.
Tsy misy tokoa izany « fanaka malemy » izany satria samy mitovy na Vavy na Lahy : samy Olom-belona aloha !
Samy olombelona ka manana ny hasiny sy ny maha-izy azy!
John Berson Rakotoarivony dit :
Tena mahafaluy ahy ny mahita ny tanora malagasy manana teo-tsaina tahaka izany.
Rehefa tena tia manao zavatra dia mahavita foana. Miezaha hatrany.